မေစစ်ပိုင်| September 6, 2012 | Hits:3,313
2 | | အရှိန်ထိန်းတိုင်းစက် စမ်းသပ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မေစစ်ပိုင် / ဧရာဝတီ)
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ko September 6, 2012 - 5:47 pm	Welcome to this new.
Reply	အာဃာတ September 7, 2012 - 12:47 pm	အသင် ပုလိပ် အပေါင်းတို့…. ဖမ်းဆီးမယ့် နေရာကိုလျိူ့ဝှက်ထားပြီး ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ စတင် ကြံစည်မည့်အစား သူများနိုင်ငံမှာ ယာဉ်အန္တရယ်ကင်းအောင် ဒီအရှိန်တိုင်း ကိရိယာတွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာတပ်သလဲဆိုတာလေ့လာပါ။ တွေ့ရတာကတော့ အန္တရယ်ရှိတဲ့ကွေ့ (သို့) လမ်းနေရာတွေမရောက်ခင် ချည်းကပ်လမ်းနေရာတွေ၊ အရှိန်မြှင့် မောင်းနှင်စရာ စွဲဆောင်နေတဲ့ လမ်းအဖြောင့်တွေ မှာတပ်တယ်။ တပ်ထားမှန်း သိအောင်လို့ “Smile Speed camera ahead” ဆိုတဲ့ sign-board တောင် ထောင်ထားပေးသေးတယ်။
Reply	tinaungsoe September 8, 2012 - 11:17 am	လူကြီးမင်းများ၏အရှိန်ထိန်းကရိယာတပ်ချင်းသည်အလွန်ပင်ကောင်းပါ၏ သို.သော်အမြန်လမ်းပေါ်တွင်စီးနှင်းနေသောဆိုင်ကယ်များ လမ်းဗြောင်းပြန်မောင်းသောဆောက်လုပ်ရေးယာဉ်များဆောက်လုပ်ရေးထော်လာဂျီများ